MOTORCARMYANMAR သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကားနှင့် ကားထုတ်ကုန်များကြော်ငြာ(စာရင်းပြု)ဝန်ဆောင်မှုခြင်း။ ကားပရိတ်သတ်များ၊ ရောင်းသူများနှင့်ဝယ်သူများအတွက်။ ကားတင်သွင်း ဒါမှမဟုတ်တင်ပို့မလုပ်၏။ အသုံးပြုသူများသည် ကားအထူးဈေးနှုန်းများ၊ အထူးလျှော့စျေးများ၊ ငွေပေးချေမှုများနှင့် ပွဲများအကြောင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်လျှင်။ တစ်ဦးချင်းများ၊ ကားအရောင်းစင်တာများ၊ အရောင်းပြခန်းများ၊ မြန်မာပြည်မှကုန်သည်များမှကားရောင်းသူကိုရွေးချယ်ပါ။ MOTORCARMYANMAR ကိုအသုံးပြုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အခြားအသုံးပြုသူများကိုရှာနိုင်သည်။
အသုံးပြုသူများ နှင့် အသုံးပြုမှုအတွက်
2. MOTORCARMYANMAR မှာဘာလုပ်လို့ရလဲ။
3. ကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့် ကား/ကားဆက်စပ်ပစ္စည်း ကိုရှာမတွေ့ပါ။
ရောင်းသူများ (ကြော်ငြာသူများ) အတွက်
10. ကျွန်ုပ်သည် ၀န်ထမ်းများနှင့်ပိုမိုသောအချက်အလက်အတွက်စကားပြောနိုင်ပါသလား။
11. ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီ / စီးပွားရေးကိုလည်းကြော်ငြာလို့ရမလား။